Ity no laharana iPad Pro vaovao, mpomba bebe kokoa noho ny taloha | Avy amin'ny mac aho
Hatramin'ny nampidiran'ny Apple ny iPad Pro voalohany, ny maodely 2015-inch, tamin'ny 12,9, betsaka ny vinavinany momba ny mety hanandraman'ny Apple hamadika ny iPad ho MacBook, fiovam-po mety ho nataon'i Tim Cook mihitsy. Nolaviny hatrany, fa izany tokoa Tsy midika izany fa tsy mety hitranga amin'ny ho avy sy ny fitsapana lazaiko io.
Apple dia nanolotra ny taranaka vaovao an'ny iPad Pro range, taranaka iray manolotra antsika ho manintona azy lehibe indrindra fampidirana ny teknolojia Face ID, teknolojia mamela antsika hamaha ny iPad tsy mila mifandray amin'ny bokotra an-trano, bokotra iray izay nanjavona niaraka tamin'ny sensor an'ny dian-tànana. Saingy tsy izany no zava-baovao lehibe avy amin'ny tanan'ny iPad Pro 2018.
Ny zava-baovao iray natolotry ny laharana iPad Pro vaovao dia hita ao amin'ny fananganana fifandraisana USB-C fa tsy ny tselatra nentim-paharazana izay niaraka taminay nanomboka tamin'ny 2012 niaraka tamin'ny fahatongavan'ilay iPhone 5. Ity fifandraisana ity dia ahafahantsika mampifandray ny iPad Pro hanara-maso ny vahaolana 4k hahafahana manova am-pilaminana kokoa ny horonan-tsary na sary amin'ny fomba milay kokoa. Ho fanampin'izany, hamela antsika hikaoka ny iPhone.
Ny fandraisana ny teknolojia Face ID sy ny fanjavonan'ny bokotra an-trano mitaky ny fihenan'ny frame, zana-kazo izay nahena ho faran'izay betsaka nefa mamela antsika hanohy hihazona tsara ilay fitaovana amin'ny tanana roa nefa tsy hikasika ny efijery, fikapohana izay afaka manome lesoka tsara eo amin'ny efijery.
Ny sisin'ny taranaka iPad vaovao dia efa-joro mampiseho antsika a famolavolana tena mitovy amin'ny iPhone 5 sy 5s. Ity fanavaozana ity dia avy amin'ny tanan'ny Apple Pencil vaovao, izay mifikitra amin'ny sisiny mba tsy hahavery azy antsika. Ny maodely 10,5-inch, aorian'ny famelarana ny efijery dia tafakatra 11 santimetatra.
Raha mbola mitazona ny haben'ny efijery mitovy ihany ny maodely 12,9-inch, fa ny habeny dia nihena be. Ho fanampin'izany, ny maodely roa dia nihena be, lasa mahia ankehitriny ary mahazo aina kokoa amin'ny tanana iray. Ao anatin'ireo modely roa ireo dia manana ny A12X Bionic, kinova mahery kokoa an'ny processeur izay hitantsika ao anatin'ny iPhone XS, iPhone XS Max ary iPhone XR.
Ny toerana fitahirizana dia manitatra hatramin'ny fahaiza-manao 1TB, maodely mety ho lafo be.
1 Vidin'ny IPad Pro 2018 sy misy
1.1 Vidiny iPad Pro 2018 kinova Wi-Fi
1.2 Vidiny iPad Pro 2018 kinova Wi-Fi + LTE
Vidin'ny IPad Pro 2018 sy misy
Vidiny iPad Pro 2018 kinova Wi-Fi
iPad Pro 11 santimetatra 64 GB - 879 euro
iPad Pro 11 santimetatra 256 GB- 1.049 euro
iPad Pro 11 santimetatra 512 GB - 1.269 euro
11-inch iPad Pro 1 TB - 1.709 euro
iPad Pro 12,9 santimetatra 64 GB - 1.099 euro
iPad Pro 11 santimetatra 256 GB - 1.269 euro
iPad Pro 11 santimetatra 512 GB - 1.489 euro
iPad Pro 11 santimetatra 1 TB - 1.929 euro.
Vidiny iPad Pro 2018 kinova Wi-Fi + LTE
iPad Pro 11 santimetatra 64 GB - 1.049 euro
iPad Pro 11 santimetatra 256 GB- 1.219 euro
iPad Pro 11 santimetatra 512 GB - 1.439 euro
11-inch iPad Pro 1 TB - 1.879 euro
iPad Pro 12,9 santimetatra 64 GB - 1.269 euro
iPad Pro 11 santimetatra 256 GB - 1.439 euro
iPad Pro 11 santimetatra 512 GB - 1.659 euro
iPad Pro 11 santimetatra 1 TB - 2.099 euro.
Ireo iPads vaovao dia efa azo tahirizina amin'ny alàlan'ny tranokala Apple, fa tsy ho hita raha tsy amin'ny 7 Novambra ho avy izao, toy ireo Mac vaovao natolotra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » iPad » Ity no laharana iPad Pro vaovao, mpomba bebe kokoa noho ny hatramin'izay
Ny Mac mini koa dia mahazo kinova vaovao mahery vaika kokoa